Somali (Af-Soomaali) | The Story of Layla and Majnun(Sheekadii Layla iyo Majnun) | WorldStories
Sheekadii Layla iyo Majnun Awalkhan Ahmadzai and Emal Jabarkhail
Sheekadii Layla iyo Majnun
Sheeko Afgaanistaan ah
Qays ibn al-Mulawwah wuxuu ahaa will markii uu si qoto dheer u jeclaaday Layla Al-Aamiriya. Wuu hubay jaceylkaan maalintii ugu horeysay ee uu ku arkay dugsiga. Wuxuu durbadiiba bilaabay inuu u qoro gabayo jeceyl oo qurxoon ee ku saabsan Layla oo si dhawaq dheer ugu aqriyay jiirooyinka wadada qof walba ee rabaa inuu dhageysto. Dareen noocaas ah wuxuu muujiyaa jaceyl iyo ixtiraam ee ku sababay kuwa badan inu ku tilmaamaan wiilka sida Majnun, oo micnaheeda ah mid waalan.
Maalin ayaa, Majnun wuxuu helay geesimaada uu ku weydiiyo aabaha Layla inuu guursado gabadhiisa, laakin aabihii wuu diiday codsiga. Guur noocaas ah, aabaha wuxuu sabab ugu dhigay, inay ku sababeyso kaliya fadeexad. Kuma haboonaaneyso in gabadhiisa guursado qof dadkoo dhan ugu yeeraan 'qof waalan'. Badelkii, Layla waxaa loo balan qaaday nin kale.
Majnun waxaa ka adkaaday murugo iyo inuu ka tago gurigiisa iyo qoyska oo ku dhuuntay keymaha. Wuxuu kula noolaa nolol murugeysan oo kalinimo ah xayawaanada keynta, isaga oo ku isticmaalayo maalmihiisa inuu u sameeyo gabayo jaceylkiisa Layla. Layla waxaa lagu qasbay inay guursato nin kale iyo, inkastoo aysan isaga jecleen sababtoo ah qalbigeeda waxaa weli iskaleh Majnun, waxay noqotay xaas daacad ah.
Aqbaarta guurkaan waxay ku aheyd mid xun Majnun kaas oo sii waday inuu ku noolaado nolol kalinimo ah, oo diidayo inuu guriga hooyadiisa iyo aabihiis ee magaalada ku soo laabto.
Hooyada iyo aabaha Majnun waxay ugu xiiseen wiilkoodii si xun oo aad u rabeen maalin walba inuu ku soo laabto guriga. Cunta ayay ugu reebayaan bartamaha beerta oo rajooyinka inuu hal maalin iyaga ku soo laabanayo ee ka soo baxayo saxaraha. Laakin Majnun wuxuu ku haray keymaha, isaga oo qorayo gabaygiisa oo kalinimo ah, marnaba lama hadlin hal ruux.
Majnun wuxuu ku isticmaalay waqtiga kaligiisa, oo ku haraareysan kaliya xayawaanada keymaha ee isugu imaado agagaarkiisa oo illaaliya inta lagu jiro habeenada dheer ee saxaraha Waxaa inta badan arkayay safrayaal maraya wadadooda ee ku socdo magaalada. Safrayaasha waxay dhaheen in Majnun ku isticmaalo maalmihiisa isaga oo isu aqrinayo gabayo nafsadiisa oo ku qorayo ciida ul dheer; waxay dhaheen inuu dhabtii waashay oo qalbi jabanyahay.
Sannooyin badan kadib, aabaha iyo hooyada Majnun way dhinteen labadoodaba. Iyaga oo og ixtiraamkiisa ee waaladiintiisa, Layla waxay go'aansatay inay u dirto eray ah dhimashooda. Ugu dambeyntii waxay aragtay nin waayeel ah ee sheegay inuu ku arkay Majnun saxaraha. Kadib baryo badan oo ka codsatay ninkii waayeelka ahaa inuu ogolaado inuu u sheego fariin waqtiga dambe ee safarkiisa baxayo.
Maalinbaa, ninkii waayeelka wuxuu gudbay wadooyinka Majnun oo joogo saxaraha. Halkaas wuxuu si wanaagsan u gaarsiiyay aqbaaraha la xiriiro dhimishada waaladiinta Majnun oo wuxuu ka marqaati kacay dharbaaxida xun ay u aheyd gabyaaga da'da yar.
Waxaa ka adkaaday shalaay iyo qasaaraha, Majnun wuxuu ka jaray nafsadiisa caalamka kale oo wuxuu wacad ku galay inuu ku noolaado saxaraha illaa uu ka dhinto.
Sannooyin kadib, ninka Layla ayaa dhintay. Gabadha da'da yar waxay rajeyneysay in ugu dambeyntii ay la jireyso jaceylkeeda kaliya; ee in ugu dambeyntii iyada iyo Majnun ay wada jirayaan weligood. Laakin nasiib daro tani maysan noqon. Dhaqanka dalbaday in Layla sii joogto gurigeeda kaligeed si ay ugu murgooto ninkeeda dhintay labo sanno oo dhan iyada oo aan arkeynin qof kale. Fikrada ah inaysan arkin Majnun labo sanno oo kale waxay aheyd wax ka badan ee ay dulqaadan weysay Layla. Waxay kala gooniyoobeen waqti nolol iyo labo sanno oo kale oo kalinimo ah, labo sanno oo kale isaga oo aan iyada arkeynin jaceylkiisa, waxay aheyd si ku fillan oo ku sababo gabadha yar inay ka rajo beesho nolosha. Layla waxay ku dhimatay qalbi jabnaan, kaligeed gurigeeda iyada oo aan marnaba arkin Majnun markale.
Aqbaarta dhimashada Layla ayaa soo gaartay Majnun oo keynta ku jiro. Wuxuu isla markiiba u soo safray halka Layla lagu aasay iyo halkaas wuxuu ku ooyay oo ku ooyay illaa uu isagana isugu dhiibo muradada aan suurtogalka aheyn oo ku dhintay dhinaca qabriga jaceylkiisa dhabta ah.
‘Waxaan soo maray darbiyadaan, darbiyada Layla
Oo shumiyay darbigaan iyo darbigaas.
Ma ahan jaceylka guryaha ee qaaday qalbigeyga
laakin Midka dagan guryahaas.’